(FAALLO): Duullaanka Alshabaab ee Puntland ma mideyn karaa Isfahamka Dowladda Federalka iyo Maamulka Puntland ? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
(FAALLO): Duullaanka Alshabaab ee Puntland ma mideyn karaa Isfahamka Dowladda Federalka iyo Maamulka Puntland ?
Maamul-gobaleedka Puntland ayaa waxaa ku soo faruurmay Jiho cusub oo Dagaal, kadib, markii ay boqolaal ka tirsan Alshabaab gaareen qeybo ka mid ah Deegaanadda Xeebta leh ee Goballadda W/bari ee Somalia.
Qulqulkaasi ayaa u muuqda inuusan si sahal ah ku imaanin, waayo Alshabaab waxaa lagu yaqaanaa inay muddo dheer sahmin ku sameeyaan Jihadda ay u arkaan inay gaarsiiyaan Hawlgalkooda Hubeysan.
Khubarada Milliteriga waxay rumeysan yihiin in Alshabaab doonayaan inay helaan Deegaanno cusub oo ay ka sii wadi karaan Halgankooda Hubeysan, maadaama ay Koonfurta Somalia kala kulmeen culaysyo Milliteri iyo mid Loojistiko.
Khubarada waxay kale oo u arkaan qorshaha ay Alshabaab haatan ugu ruqaansadeen Puntland inuu salka ku hayo Istaraatijiyadda Alshabaab ku doonayaan inay ku gaaraan Deegaanadda Puntland, gaar ahaan Buuraha Galgala ilaa Gacan-biyoodka Baabal-mandabka mashquulka badan.
Siyaasiyiinta ayaa iyagana ku tilmaamay Qorshaha Alshabaab ee Puntland inay saamayn ku yeeshaan Nidaamka Maamulka iyo Deganaanshaha lagu caano maalay ee Puntland iyo inay ka abuuraan Xiisado Siyaasadeed iyo mid Bulsho.
Xilliga ay Alshabaab ku soo beegeen inay Aag cusub ka furan Puntland ayaa ku soo beegantay iyadoo uu Maamulka Puntland khilaaf kala dhexeeyo Dowladda Federalka, taasi oo ay dhici karto inay Alshabaab fursad ka heleen inay u soo dusaan Puntland.
Mowjadda Siyaasadda ee Dowladda Federalka iyo Maamulka Puntland ayaa ku salaysan arrimo Farsamo, inkastoo aysan Labada dhinac weli ku guuleysanin inay xaliyaan Khilaafka dhinaca Aragtida ee ka dhashay Nidaamka Doorashooyinka dabayaaqadda sannadkan ka dhici doonta dalka Somalia.
Siyaasiyiinta Qunyar-socodka ayaa rumeysan inay Labada dhinac gaari karaan Is-faham iyo Isku-tanaasul, si aysan Alshabaab uga faa’ideysanin Khilaafka Dowladda Dhexe iyo Puntland.
Siyaasiyiinta kale ee inta badan ifiyo Aragtiyaha Mucaaradka ayaa ka digay inuu Qulqulka Alshabaab saamayn xooggan ku yeelan karto Nidaamka Doorashadda ee ay Puntland ku doonayso in lagu saleeyo Nidaamka Deegaanka.
Haddii ay Madaxda Puntland horey ugu adkeysanayeen Nidaamka Deegaanka, waxay haatan u muuqataa inuu Halbeeggii Siyaasadda isbedel ku imaanayo, waayo Alshabaab waxay haatan dhufeysyo kaga jiraan ilaa 7 Deegaan oo ka tirsan Puntland, haba ugu horreyaan Deegaanadda Buuraleyda Galgalo iyo Qalcadaha Toogga Suuj ee duleedka Degmadda Garmala ee Nugaal.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Duullaanka Alshabaab ee Puntland mideyn karo Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedka Puntland, waxayna Madaxda Puntland ku khasban yihiin inay Madaxda Hay’addaha Ammaanka ee Dowladda Dhexe ka kororsadaan Khibradaha u horseedi karaa inay iska caabiyaan La-dagaalanka Alshabaab.
Madaxweynaha Puntland, C/weli Gaas ayaa ka shanqriyey inay Maamulkiisa iyo Dowladda Federalka ka mideysan yihiin La-dagaalanka Alshabaab, wuxuuna Alshabaab ku sifeeyey Caddow Guud oo khatar ku ah Somalia iyo Caalamka.
Marka la xooraansado Alshabaabka ku sii qulqulayo Puntland ayaa waxay isugu jiraan Alshabaabka taageersan Ururka Alqaacida iyo Garabka kale ee sheegtay inay taageersan yihiin Kooxda Daacish, waxayna taasi horseedi kartaa in Puntland ku soo faruurmaan Aagag cusub oo Dagaal oo khatar xambaarsan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay Dowladda Federalka iyo Maamulka Puntland u midoobaan La-dagaalanka Alshabaab, waxay taasi soo dedejin karta in la iska mooso qulqulkaasi, haddiise aan Deganaansho Siyaasadeed la helin waxay Alshabaab khatar gelin karaan Qabsoomidda Doorashooyinka Somalia, gaar ahaan kuwa Maamul-gobaleedka Puntland.
Talyaaniga oo sheegay inay Malaayiin EURO ugu deeqeen Dib-u-dhiska Somalia.
DEG DEG: Dowlada Soomaaliya oo diyaarado hub wada u direysa Puntland